Nordstrom ncheta Sale 2020: 30 Top Picks na Best Deals - Ejiji
Ejiji News Ihe Ọmụma & Mmụta Kichin Na-Adịgide Adịgide Enyi Na Ezi Na Ụlọ Ahụike Mma Ibu Ibu Atụmatụ & Ndụmọdụ Gynaec #actagainstabuse
Ọ bụ Oge Ikpeazụ Gị pzụ ahịa Nordstrom Anniversary Sale-Lee Ihe 30 You Ga-achọ Snag
Na Nordstrom ncheta ncheta mara maka ịnye akara ndị bụ isi n'ihe niile site na ụdị uwe elu ruo na ndozi ụlọ, na usoro afọ a abụghị ihe dị egwu. Haven't mebeghị nzụta gị? Nwere ụbọchị ole na ole ọzọ iji mee nke a ma anyị na-awụfu ihe niile dị n'okpuru.
Kedu mgbe Nordstrom na-eme ncheta ncheta?
N'afọ a, ọ malitere na 9:30 nke ụtụtụ EST na August 19 wee na-aga site na August 30. You ga-enwe ike ịzụ ahịa ire na ụlọ ahịa n'oge ahụ. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye nwe kaadị Nordstrom, ị nwere ike nweta ọrịre ọrịre n'isi mbido August 4, dabere na ọkwa onye nwe gị.
Kedụ ka m ga-esi nweta mbido ncheta Nordstrom?
Iji nweta ohere mbụ, ị ga-enwerịrị Nordstrom kaadị akwụmụgwọ . Nke ahụ ga - enye gị ohere ịbanye na ya Nordy Club , nke na-enye gị ohere irite isi atọ maka dollar ọ bụla i mefuru site n'aka ndị na-ere ahịa. Ozugbo ị bụ onye na-ejide kaadị, ị ga-enweta Ọnọdụ, Mmetụta, Nnọchiteanya ma ọ bụ akara ngosi dabere na ego ole ị na-emefu-ị ga-enwekwa ohere ịbanye n'oge gara aga na ncheta ncheta. Oyiyi nwetara ohere bido n’abalị 4 nke onwa anọ, ndị nnọchi anya ya na August 7, ndị na - emetụta ya n’August 10 na Insiders na Ọgọstụ 13. Ọ bụrụ n’onye akara aka n’afọ a, gbaa mbọ banye na kaadị ASAP kaadị ka ị wee nweta uru niile n’oge ọzọ ire afọ.
Gịnị Gụnyere na Ọrịre?
Nordstrom Anniversary Sale na-etinyekarị azụmaahịa na akpụkpọ ụkwụ maka ezinụlọ dum yana akpa, ọla, mma, ngwongwo ụlọ na ndị ọzọ. N'afọ a, Nordstrom nyere ọhụụ nhụchalụ nke ire ere niile na-amalite na July 24, na-enye gị ohere ịchekwa ihe na ndepụta nke ịchọrọ ma tinye ha na ụgbọ nke oge ị nwetara ohere.
Ugbu a anyị enwetachala ozi ahụ niile, ka anyị zụọ ahịa. N'ebe a, ihe 30 anyị na-ejide tupu ha ere (ma ọ bụ elekere na-apụ).
Njikọ: Abụ m onye nchịkọta akụkọ ejiji, ndị a bụ 16 ga - esi na Nordstrom Anniversary Sale
1. Natori feathers Underwire ngwe efe efe
Ihe nkedo T-shirt a bụ onye na-agụ PureWow fave maka ekele ya na nkwado ya na-enweghị atụ.
Zụta ya ($ 68; $ 40)
Odikwa na nha 30B rue 36G
2. jEFFREY Campbell Troye Square Mkpịsị ụkwụ Bootie
Booties ndị isi ojii ndị a dị ka otu nde ego (ọ nwere ihe ime na mkpịsị ụkwụ ahụ) ma agaghị agafe $ 100 mmefu ego gị.
Zụta ya ($ 150; $ 99)
Odikwa na nha 5.5 rue 10
3. BP. Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ Faux
Le, leggings kachasị mma ị ga-etinye. Ihe na-egbu maramara na-ele anya nke ukwuu na ihe ọkụkụ, jaket denim na ndị ọzọ.
Zụta ya ($ 49; $ 29)
4. Kate spade New York nnukwu florence akpụkpọ anụ Tote
Nke a na extra sara mbara Tote ka nke pebbled akpụkpọ anụ maka a luxe anya na inogide ewu. Anyị hụrụ ogologo ogologo ejiri aka dabara adaba na ubu anyị.
Zụta ya ($ 298; $ 180)
5. akpụkpọ ụkwụ Tory Burch Leigh Slide
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ bụ ebe niile oge anwụ. Pairzọ a cushioned si Tory Burch na-akwado ma na-adọrọ adọrọ, nke karịrị iji ree anyị na ha.
Zụta ya ($ 228; $ 140)
Odikwa nha 5 rue 11
6. ZELLA akpachapuru anya ọkacha mmasị Zip Hoodie
O doro anya na, hoodies Zella dị nnọọ ka ewu ewu dị ka leggings, nke pụtara na ọ gaghị adị anya tupu nwa a ere ...
Zụta ya ($ 99; $ 66)
Odikwa nha XXS rue XXL
7. Stuart Weitzman Zuzanna Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Nke a kpochapụwo suede buut bụ azụ maka ọzọ oge. Eziokwu ahụ bụ na akpụkpọ ụkwụ ndị a na-eme ka uwe ọ bụla nwekwuo uwe (yep, ọbụna leggings), yana ike silhouette doro anya na-adịgide adịgide pụtara na anyị ga-agbakwunye ya na ụgbọ ala anyị ozugbo.
Zụta ya ($ 795; $ 500)
Odikwa nha 5 ruo 12
8. LEITH Cozy Long Cardigan
A na-eme cardigan a na-atụgharị n'elu ga-eyi n'afọ niile.
Zụta ya ($ 69; $ 40)
9. SAM EDELMAN Notch Collar Coat
Mgbe ụfọdụ ị na-achọ ka uwe gị bụrụ uwe niile, dị ka nke a na-acha anụnụ anụnụ.
Zụta ya ($ 320; $ 190)
Odikwa na nha 4 ruo 16.
10. La Mer Nchịkọta Mmiri ahụ Na-ejupụta
Mmiri moisturizer La Mer-nke a na-etinye na ya elixir ọgwụgwọ Miracle Broth-adịghị ọnụ ala, yabụ anyị na-eche mgbe niile ịkwakọba ya mgbe ọ na-ere ya. Obere obere a na-enye gị Créme de La Mer na ngwaahịa anọ ndị ọzọ (Mkpuchi Mkpuchi Ude Ọgwụgwọ, Exfoliator Na-ejupụta Ọbara, Ọbara Na-agbanwe Ọrịa na Anya Na-etinye Anya) maka ihe na-erughị $ 350.
Zụrụ ya ($Ugboko 509; $ 340)
11.LANCÔME GENIFIQUE BUNDLE
Ngwaahịa a bụ ngụkọta egwuregwu egwuregwu. Ọ na-edozi mkpesa nke nká (dịka ụda, udidi na akara ọma) n'ime ụbọchị asaa. Ma ezigbo kicker? Ọ na-enye mmuke ozigbo maka ụwa niile nke gị agụụ afọ ojuju (gụnyere anyị). Oh, na ngwungwu a na-abịa na karama buru ibu. Nordstrom, ị naghị agbagha gburugburu.
Zụta ya ($ 236; $ 159)
na-adịgide adịgide ntutu mwepụ si ihu
12. jaak nwa ojii Jumbo Jụụ Mmiri Mmiri Ude
Ọ bụrụ n ’ị gafere karama ude mmiri nke mmiri mmiri a, ị ga - enwe ekele maka ụdị mgbapụta jumbo a. Onye ma, o nwedịrị ike ime ka ị daa tupu ị daa. O zuru oke maka ịkpụcha akpụkpọ anụ ụsọ mmiri ma ọ ga - apịa gị aka, mee ka ọ dị ọcha aka n'oge ọ bụla.
Zụta ya ($ 59; $ 40)
13. BEAUTYBIO GLOPRO zuru ezu ezubela
Microneedling abụghị omume ọhụrụ, mana naanị ọla edo GloPro ọla edo sitere na BeautyBio bụ. Bugharịa ya na ihu gị, olu na obi gị ma ị ga-ahụ nke ọma, na-esiwanye ike ma na-enwu gbaa. Na mgbakwunye, setịpụrụ a na ihe niile ịchọrọ maka usoro ịka nká zuru oke: GloPRO Microneedling Rejuvenation Tool, full-size Ultimate Vitamin C Facial Moisturizer, GloPRO EYE MicroTip Attachment, Bright Eye Colloidal Silver Eye Gels (5 pairs) and Skin Prep Pads (5-agụta).
Zụta ya ($ 318; $ 179)
14. DR. BARBARA STRM ANTI-AGAT E dị mkpa
Serums Dr. Barbara Sturm bụ ndị a hụrụ n'anya nke ukwuu, n'ihi na ha na-arụ ọrụ ọ bụ ezie na ọ na-efu obere ego. Kpọrọ ihe, Hyaluronic Serum buru ibu bụ $ 300 dị jụụ. Ntọala a gosipụtara mmadụ atọ n'ime ndị na-ere ya kachasị mma, gụnyere Hyaluronic Serum, Super Anti-Aging Serum na Night Serum ọhụụ, yabụ ị nwere ike inwe mmetụta maka ihe na-egbukepụ egbukepụ. Nanị nsogbu? Probably nwere ike ịga zụta ụdị nke zuru oke ozugbo ị hụrụ ihe ha na-eme maka akpụkpọ ahụ gị.
Zụta ya ($ 343; $ 215)
15. AKW BKWỌ BRIOGEO NA SITE NKỌ
Branddị ntutu a na-eji oji nwere bụ otu n'ime ọkacha mmasị anyị maka curls hydrated. Limiteddị ụdị a nwere obere mmadụ atọ kachasị mma: nwekwala nkụda mmụọ, mmezi! Igwe nkpuchi, nkpuchi isi mkpuchi nke unyi + Coconut Oil Micro-Exfoliating Scalp Scrub Shampoo na nha nke ọma Friwell Frizz Rosarco Milk Hapụ-Na Ọnọdụ raygba. Nro, ntutu na-egbu maramara, na-abịa ozugbo!
Zụta ya ($ 67; $ 45)
16. CHARLOTTE TILBURY PILLOW EGO EGO EGO
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye nchịkọta akụkọ ọ bụla mara mma na akara a nke egbugbere ọnụ na egbugbere ọnụ maka ezi ihe kpatara ya: Ha na-anọpụ iche nke na-anọpụ iche na-eme ka akpụkpọ anụ ọ bụla dị mma. Ihe ndi a na akpo Nordstrom na-egosiputa ihe nkpuchi collagen a ma ama, na ntinye ohiri isi nke nkpuchi aka.
Zụta ya ($ 91; $ 68)
17. PMD Personal Microderm Classic Ngwaọrụ na Aka & Kitkwụ Kit
Ngwọrọgwu a na - agwọ microdermabrasion n’ụlọ ga - eme ka mmetụta gị dị nro ma dịkwa nro dịka ọ na - eme mgbe ihu dị ezigbo mma.
Zụta ya ($ 159; $ 99)
18. Nordstrom 400 Eriri Okpukpo Organic Cotton Sateen Sheet Set (Queen)
Na-ahọrọ ịzụta mkpụrụ osisi, yabụ gịnị kpatara ị na-eji akwụ ụgwọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ? A na-atụgharị mpempe akwụkwọ a site na owu na-adị nro dị nro maka ụra, na-egbu ume ma na-ehi ụra nke abalị.
Zụta ya ($ 119; $ 79)
19. AKW &KWỌ & BIN BINRIN IHE NA AKW CKWỌ AKW CKWỌ AKW (KWỌ (QUEEN)
Hụrụ n'anya nke linen ma na-ahọrọ ndị crisp obi na-adị nke owu? Ihe nkpuchi a na-agbanwe agbanwe na-enye ndi kachasi nma nke uwa na owu n'otu uzo na linen nke ozo.
Zụta ya ($ 169; $ 84)
20. DKNY Pure COMFY WHITE DUVET COVER (EZE)
Enwere ihe kpatara ụlọ oriri na ọ hotelsụ useụ ji eji akwa ọcha na-acha ọcha: Enweghị ihe ọzọ na-adọrọ adọrọ. Na pristine a, 100% owu duvet cover ga-akpalite ndị ahụ na-eche kwa abalị site na nkasi obi nke ụlọ gị.
Zụta ya ($ 170; $ 119)
21. NORDSTROM 400 TUNTR 400 AKW 400KWỌ AKW SEKWỌ NT SER P AKW SEKWỌ AKWFKWỌ (QUEEN)
N'ikpeazụ, onye nkasi obi dị ala nke na-arụ ọrụ maka oge ọkọchị, oge oyi na oge ọ bụla n'etiti. Ọ bụ naanị ibu kwesịrị ekwesị iji dị mma n'oge ọnwa oyi (ma ọ bụ mgbe AC ​​nọ na mgbawa zuru oke).
Zụta ya ($ 329; $ 220)
22. IWU N’IME HLỌ OULU KPUO blanket
Pommụ obere pom ole na ole nwere ike ime ka ọnọdụ gị dị mma ozugbo. Ekwetaghị anyị? Tụfuo nke a n'elu ogwe aka nke ihe ndina ya ma lee ka ohere gị ga-agbanwe ozugbo, nke nwere nchekwube.
Zụta ya ($ 184; $ 120)
23. UGG RUSSEL SHOWER CURTAIN
Ọ ga-eju gị anya ihe ọkụ, igwe ikuku ịsa ahụ nwere ike ime maka ime ụlọ ịwụ ahụ. Ejiri owu gauzey mee nke a iji kpalite ebe okpomọkụ oasis vibes.
Zụta ya ($ 78; $ 50)
24. Zella Girl N ’Ndụ Mkpịsị Ugwu
Dị nnọọ ka ụzọ kachasị ewu ewu nke Zella leggings (nke dịkwa ire, BTW), mana nha ya.
Zụta ya ($ 39; $ 25)
Dị na nha XS na XL.
25. UGG Classic II Shimmer Metallic Bootie
Nwere ike icheta ihe ọ bụla mara mma karịa foto nke nwa gị na-agba ọsọ na snow na akpụkpọ ụkwụ UGG ndị a? Anyị na-ebu amụma amụma Instagram nwere mmasị n’elu.
Zụta ya ($ 130; $ 75)
Odikwa nha 1M rue 6M
26. Akwa Giraffe Luxe kpuchie akwa nhicha
N'ihi na ọ dịghị ihe cuter dị ka nwatakịrị ejiji dị ka anụ ọhịa bea, nke ọhụrụ nke tub ahụ.
Zụta ya ($ 49; $ 32)
Dị otu nha
27. VANS SK8-MID AKW REKWỌ V SNEAKER
Gaba, nweta kenha abụọ maka ezinụlọ dum.
Zụta ya ($ 45; $ 30)
Dị na nha 11M na 3
28. 1901 Anwụ na-acha Bipute Anwụrụ ọkụ Uwe
Ma ụlọ akwụkwọ bidoro ọfụma ma ọ bụ IRL, ọ ga - achọ iyi akwa agụ a agụ maka ụbọchị mbụ ya.
Zụta ya ($ 35; $ 20)
Odikwa nha 7 ruo 16
akụkọ ịhụnanya kacha mma Hollywood fim
29. Ugwu North Face ThermoBall Eco kpuchiri ekpuchi
Nke a post-n'ji recycled-naịlọn jaket folds ala a obere square maka mfe mbukota. Ma echegbula, ọ dịkwa oke ọkụ.
Zụta ya ($ 90; $ 63)
Odikwa na nha 0M rue 6M
30. obere m Corduroy Jacket, Fox Bipute T-Shirt & Jeans Set
Ọ nwere ike na-eyi tee na jeans ugbu a, na oyi akwa jaket wee daa.
Zụta ya ($ 62; $ 40)
Odikwa na nha 12M rue 24M
Njikọ: Ndị na-azụ ahịa enweghị ike ịkwụsị ịzụta ihe 8 ndị a site na Nordstrom Anniversary Sale
Categories Mma Agbamakwụkwọ International Nddị
top 10 ihunanya bekee fim
ndepụta menu nri China
esi ejikwa uto ntutu na ihu
ọgwụgwọ okike maka ntutu isi
ndepụta nke ihe nkiri vidio nke 2019